ငယ်စဉ်ဘ၀မှာ လူတိုင်းလိုလို အနာဂတ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ အနည်းနဲ့အများ စိတ်ကူးယဉ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာမှအထွေအထူးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါ။ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်တော့ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ကစပြီး၊ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်စိတ်စပြီးသန္ဓေတည်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့စေ့ဆော်ချက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ ဆေးရုံဆေးခန်းမကြာခဏရောက်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပါ။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက နေမကောင်းခဏခဏဖြစ်ပြီး ဆေးရုံပြခဲ့ရတာ၊ ဆေးတွေထိုးခံခဲ့ရတာမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသလည်းခံရဖူးတယ်။ စက်ဘီးနဲ့ကားတိုက်မိလို့သတိလစ်ပြီးဆေးရုံရောက်ဖူးတယ်။ အစုံပါဘဲ။ လူကျန်းမာရေးမကောင်းရုံသာမက၊ စိတ်ကလည်းကြီးတယ်လေ။ ရီစရာ၊ တရားကျစရာပြောပြပါဦးမယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ကတည်းက တခုခုကို လုပ်ချင်ပြီဆို ဖြစ်မြောက်မှစိတ်ကျေနပ်ခဲ့တယ်။ လုပ်မရရင်အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ ၅တန်းနှစ်လောက်ကထင်တာပါဘဲ။ တစ်ရက်မှာတစ်ယောက်ထဲဂျင်ပေါက်ကစားနေရင်း အဲဒီဂျင်စုတ်(ထိုစဉ်ကစိတ်ထဲမှာခေါ်ခဲ့မိတာ) က မလည်ခဲ့ဘူး။ ညမိုးချုပ်ခါနီးအထိမလည်မချင်းကြိုးစားပေါက်တယ်။ နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှမလည်တဲ့အဆုံး ဒေါသစိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်သွားပြီး ..ဂျင်စုတ်..ဂျင်စုတ်..ကဲဟာ..ဆိုပြီး၊ ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ ဖိနောက်နဲ့ဆက်ကာဆက်ကာပေါက်ချပစ်လိုက်တယ်လေ။ သုံးချက်မြောက်လောက်ထင်ပါတယ်၊ ဂျင်ရဲ့သံချွန်ကမိုးပေါ်ထောင်လာချိန်နဲ့ဒေါသ ဖိနောက်နဲ့တွေ့တော့တာပါဘဲ။ ခုပြန်စဉ်းစားတော့အသည်းယားစရာကြီး။ သွေးပူနေတော့နာမှန်းလည်းမသိ၊ ဂျင်သံစူးသွားမှန်းတောင်သတိမထားမိခဲ့ဘဲ၊ နောက်နေ့မနက်အိပ်ယာထဲမှာ သွေးတွေရွှဲနေတော့မှ ဂျင်သံစူးမှန်းလူကြီးတွေပါသိသွားပြီး ချက်ချင်းဆေးရုံပြေး၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးတွေရော၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေပါထိုးခံရ၊ ၂ပါတ်လောက်ဆေးထည့်ခဲ့ရနဲ့ တော်တော်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒေါသဆိုးကျိုးပြောပါတယ်။
အဓိကအကြောင်းကိုပြန်ဆက်ရရင်၊ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာက လူဆရာဝန်ပါ။ (ရောဂါအားလုံးကုတဲ့ဆရာဝန်ကိုဆိုလိုပါတယ်) အလယ်တန်းပြီးခါနီးရောက်တော့ဆေးနဲ့နီးစပ်တဲ့ ကြက်ခြေနီ-ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းတွေတက်၊ ကိုယ့်အိမ်မှာ အနာဖြစ်ရင်ထည့်တဲ့ဆေးဗူးတွေ၊ ဆေးအိတ်လေးတွေလုပ်နဲ့ အနာဂတ်မှာဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်က ပိုအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးပီပီ အင်ဂျင်နီယာလည်းဝါသနာပါခဲ့တာပါဘဲ။ ဒီလိုနဲ့၉တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းပြန်မဖွင့်ခင်မှာ၊ မိဘတွေက ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး၊ စစ်တပ်ဆရာဝန်နဲ့အိမ်ထောင်ကျတဲ့ ကျွန်တော့်အဖေရဲ့တူမရှိရာ မေမြို့ကိုပို့လိုက်ပါတော့တယ်။ ဆရာဝန်နားနီးရင်ဖြစ်ဖို့ပိုနီးစပ်မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကျွန်တော်လူဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်က တောင်ကြီးမှာအထက်တန်းကျောင်းတွေက အပြိုင်အဆိုင်တွေပါ။ ဘယ်ကျောင်းက ၁၀တန်းအောင်ချက်အကောင်းဆုံး၊ ဂုဏ်ထူးအများဆုံးစသည်ဖြင့် ပြိုင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ အမှတ်(၄)ကျောင်းကနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများ ဆေး၊ အင်ဂျင်နီယာလိုင်းတွေဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပြိုင်အဆိုင်ဆိုတော့ ၉တန်းမှာအဆင့်ကောင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော့်ကို ကျောင်းက မပြောင်းစေချင်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းထွက်လက်မှတ်ကိုတော်တော်နဲ့မထုတ်ပေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖေကိုလည်း တောင်ကြီးမှာဘဲပြန်ထားပါ..ဆိုပြီးကျောင်းထွက်လက်မှတ်သွားတောင်းတိုင်းပြောပါသတဲ့။ အဲဒီချိန်လူကမေမြို့ရောက်နေပြီ။ ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်နေပြီ။ ကျွန်တော်ကျောင်းတက်ခွင့်မရခဲ့သေးပါဘူး။ နောက်ဆုံး ၅လလောက်နောက်ကျပြီးမှ ကျွန်တော်မေမြို့အထက ၃မှာ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတော့တယ်။ ကျောင်းဝင်ခွင့်မရသေးခဲ့ချိန်တွေကို အိမ်မှာ ဆရာမရှိဘာမရှိနဲ့ကိုယ့်ဘာသာ သင်္ချာတို့၊ ရူပ-ဓာတုတို့လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ အမ၀မ်းကွဲရဲ့အမျိုးသားစစ်တပ်ဆရာဝန်က ကျွန်တော့်ကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတယ်။ သင်တယ်ဆိုတာထက် ဖတ်စာအုပ်ထဲက ၀ါကျတစ်ကြောင်းမကျန်အကုန် ၀ါကျတစ်ကြောင်းဖတ်ခိုင်းလိုက်၊ မြန်မာလိုအဓိပ္ပါယ်ပြန်ခိုင်းလိုက်၊ မှားနေရင်ထောက်ပေးလိုက်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ Grammer ကတော့ လက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့အဖေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေလိုက်တက်ရင်း အထိုက်အလျောက်ရနေခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းကနှစ်ဝက်နီးပါးနောက်ကျပြီးမှဝင်ခွင့်ရတော့၊ စာတွေကမစုံ၊ သူငယ်ချင်းကမရှိနဲ့ အတော်အထီးကျန်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့စာမေးပွဲကြီးနီးလာခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်၊သင်္ချာနဲ့ရူပ-ဓာတုသိပ္ပံတွဲကိုလေ့လာမှတ်သားရတာ ပျော်ပေမယ့်၊ သမိုင်း၊ မြန်မာ၊ ပထ၀ီ ကျက်စာတွေကျတော့ ပျင်းလှပါတယ်။ နာမည်မှာ ဥာဏ်ပါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့အလွတ်ကျက်မှတ်ဥာဏ်ကမကောင်းပါဘူး။ ၁၀တန်းစာမှတ်စုတွေကိုလည်းပြန်မကူးခဲ့တော့ ကျက်စာတွေမှာ အတော်အခြေအနေဆိုးခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကြီးကပါလာတဲ့၉တန်းစာမှတ်စုနဲ့ ၁၀တန်းဖတ်စာအုပ်ထဲကတိုက်ရိုက်ကျက်ခဲ့ရတော့၊ ၉တန်းစာဘဲကောင်းကောင်းရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက စနစ်ဟောင်းနောက်ဆုံးနှစ်။ ၉တန်းစာတ၀က် ၁၀တန်းစာတ၀က် စာမေးပွဲမှာပါတာလေ။
လူဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နောက်အကြောင်းတချက်က မှတ်ဥာဏ်မကောင်းရုံမက အိပ်ပုတ်ကြီးခဲ့တာပါ။ ငယ်ကတည်းက ည၈နာရီမကျော်ဖူးခဲ့တာ၊ ၁၀တန်းရောက်တော့လည်း ၈နာရီထိုးတာနဲ့ မျက်စိလေး အိပ်ငိုက်တော့တာပါဘဲ။ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ သိပ္ပံတွဲတွေက ကျောင်းဝင်ခွင့်မရခင် ၅လလောက်ကိုယ့်ဘာသာအိမ်မှာလုပ်ထားလို့ အကုန်ရနေခဲ့ပါပြီ။ ကျက်စာတွေကျတော့ ဘယ်လိုမှမမှတ်မိတဲ့အပြင် အိပ်ငိုက်တာက အကြီးဆုံးအဟန့်အတားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမအဆင့် အမက လှုပ်နှိုးပြီး စာဆက်ကျက်ခိုင်းတယ်။ ဒုတိယအဆင့်ကျတော့ အမအမျိုးသားစစ်တပ်ဆရာဝန်က သားရေကွင်းလေးနဲ့ စာအုပ်ရှေ့ချပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျွန်တော့် နားရွက်ကိုခပ်စပ်စပ်လေးပစ်ပေးပါတယ်။ ဒါလည်းခဏဘဲခံပါတယ်။ တသက်လုံး၈နာရီအိပ်ခဲ့တဲ့ဦးနှောက်က ပြန်အိပ်ခိုင်းတာပါဘဲ။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့ ကဲ..ကိုယ်တော်လေး..ဒီလိုသာဆိုစာမေးပွဲကျမှာဘဲ..လမ်းလျှောက်ပြီးကျက်စမ်း..ဆိုပြီး သူတို့ရှေ့မှာ အခန်းထဲခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်ပြီးကျက်စေပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့လက်လှန်တာပါဘဲ။ ဆန်စပါး..ဆန်စပါး..ဆန်စပါးကို... (ကျွန်တော်မုန်းတဲ့ပထ၀ီထဲကစာသား) တတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း လမ်းလျှောက်ရင်းအိပ်ပျော်တဲ့ကျွန်တော့်ကို သူတို့နောက်ဆုံးလက်လျှော့လိုက်ကြပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၀တန်းစာမေးပွဲ။ ကျက်စာကလွဲလို့ ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့သင်္ချာ၊ အင်္ဂလိပ်တွေမှာ အေးဆေးပါဘဲ။ အမှတ်ယူမယ် ၉၅ကနေ၁၀၀အတွင်းရအောင်ဖြေမယ်လို့မှန်းထားတဲ့ သိပ္ပံတွဲနေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာက ကျွန်တော့်ကိုလူဆရာဝန်မဖြစ်စေခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီနေ့ကမနက်၅နာရီထ၊ စာတွေထနွှေးပြီးတော့ ကျွန်တော်ရေချိုးချင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ချမ်းချမ်းစီးစီးကြီးမှာ ရေချိုးလိုက်မိပါတယ်။အဲဒီနောက် စာမေးပွဲဖြေမယ့်ကျောင်းကိုအသွားကားပေါ်မှာ စပြီး ခေါင်းမူးပြီး၊ အန်လာခဲ့တယ်။ ကျောင်းရောက်တော့လည်းအန်တုန်း၊ ခေါင်းကပိုမူးလာပြီး၊ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတယ်။ ခေါင်းမထောင်နိုင်ဘူး။ သူငယ်ချင်းလည်းမရှိ ဘာဖြစ်နေလည်းမေးမယ့်သူလည်းမရှိ၊ ကြိတ်မှိတ်ခံနေရင်း စာမေးပွဲခန်းထဲဝင်ချိန်ရောက်တော့ ခုံပေါ်ထိုင်ပြီးခေါင်းမှောက်ပြီးခေါင်းမူးတဲ့ဒဏ်ကိုအလူးအလဲခံခဲ့ရပါတယ်။ မေးခွန်းတွေဝေတော့၊ ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါစာမေးပွဲကျတော့မယ်ဆိုပြီး၊ ခုံပေါ်ခေါင်းချလျက်နဲ့ဘဲ၊ ဓာတုဗေဒဓာတ်ငွေ့ထုတ်ဖော်ပုံရယ်၊ အီကွေးရှင်းတွေရယ်၊ စဉ်းစားစရာမလိုတဲ့မေးခွန်းတွေကို ခေါင်းမထူနိုင်တဲ့ကြားကဘဲ ကြိုးစားပြီးရေးချခဲ့ပါတယ်။ တသက်နဲ့တကိုယ်တခါမှမခံစားဖူးတဲ့ဝေဒနာကို အရေးကြီးဆုံးချိန်မှာခံစားခဲ့ရတာပါ။ ဓာတုချိန်တ၀က်လောက်ရောက်မှအခန်းစောင့်တဲ့ဆရာမတွေက ရိပ်မိသွားပြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ၊ ဘာလဲလာမေးဖော်ရပါတော့တယ်။ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပေးလို့ ဓာတုချိန်မပြီးခင် ၁၀မိနစ်လောက်အလိုမှာ အမအမျိုးသားရောက်လာပြီး အကြောဆေးတလုံးလာသွင်းပေးပါတယ်။ ဆေးသွင်းပြီးသိပ်မကြာခင်ခေါင်းမူးတာအရှင်းပျောက်သွားပြီး၊ ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာ မဖြေရသေးတဲ့မေးခွန်းတွေမြန်မြန်ဆက်ဖြေရပါတော့တယ်။ အချိန်လုနေရလို့ စဉ်းစားချိန်လည်းမရ၊ အကုန်လည်းမမီခဲ့တော့ပါဘူး။ ဒုတိယပိုင်းရူပဗေဒချိန်မှာတော့ နေကောင်းနေပြီမို့ အကုန်ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့အမကဆူပါတယ်။ နောက်ဘာသာတွေမဖြေနဲ့တော့၊ ခြစ်ချလိုက်တော့..ဆရာဝန်လိုင်းလည်းဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဆူပါတယ်။ တောင်ကြီးမှာသာဆက်နေခဲ့ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်နောင်တရမိပါတယ်။ ခြစ်ချဖို့တော့စိတ်မကူးပါဘူး။ ကျွန်တော်ခေါင်းမထူနိုင်ဘဲဖြေခဲ့တာလေးက အောင်မှတ်ရနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။
တွက်ထားတဲ့အတိုင်းဘဲ အောင်စာရင်းတွေထွက်တော့ အင်္ဂလိပ်-သင်္ချာနှစ်ဘာသာဘဲဂုဏ်ထူးပါပါတယ်။ အမှတ်စာရင်းထွက်တော့ သင်္ချာ ၁၀၀၊ အင်္ဂလိပ်စာ ၈၉။ အဲဒီနှစ်က (the whole Burma first)တပြည်လုံးပထမရသူရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအမှတ်ထက်ကျွန်တော်ကများပါတယ်။ (ကြံဖန်ပြီးဂုဏ်ယူဖြေသိမ့်တာပါ) သိပ္ပံတွဲ ၇၉ (၈၀ ရမှဂုဏ်ထူးပါ)။ ကျက်စာတွေက အောင်ရုံလေးတွေ။ အမှတ်ပေါင်း၄၄၅။ တက္ကသိုလ်တွေလျှောက်တော့၊ အဲဒီချိန်က ဆေးကအမှတ်အမြင့်ဆုံး၊ ဒုတိယက သွား-ဆေး၊ တတိယ အင်ဂျင်နီယာ၊ သူ့နောက်က တိမွေးကုနဲ့စိုက်ပျိုးရေး။(တကယ်ကလျှောက်သူနည်းတာများတာပေါ်မူတည်ပြီး အမှတ်မြင့်တာနိမ့်တာဟာ တနှစ်နဲ့တနှစ်မတူပါဘူး၊) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အမှတ်နဲ့အကောင်းဆုံးလျှောက်မယ်ဆိုပြီး၊ ရလိုရငြား၊ ဆေးက ပထမဦးစားပေး၊ နောက် သွား-ဆေး၊ နောက်ဆုံးအင်ဂျင်နီယာ၊ သုံးခုဘဲလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ တိမွေးကုကတော့မလျှောက်ခဲ့ပါဘူး။ ငယ်ငယ်ကခွေးလိုက်ဆွဲခံရဖူးလို့ တိရိစ္ဆာန်ဆိုကြောက်လို့ပါ။ အဲဒီနှစ်မှာဆေးနောက်ဆုံးအမှတ်က ၄၆၂မှတ်။ ၁၇မှတ်နဲ့ပြုတ်ပြီပေါ့။
ဒီလိုနဲ့မရည်ရွယ်ဘဲသွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ လူဆရာဝန်မလုပ်ရလည်း သွားဆရာဝန်လုပ်ရတော့မှာဘဲဆိုပြီး၊ ရောက်ရာနေရာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ သွားဆေးပညာဝါသနာမပါလို့ အမှတ်တဆင့်နိမ့်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလိုင်းကို စတက်ခါစမှာဘဲပြောင်းသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ၉နှစ်တာ (စာသင်နှစ်၆နှစ်+အပိတ်ခံရတာ၃နှစ်) လိပ်ခုံးနဲ့ဆေး(၁)မှာ လူဆရာဝန်တွေတတ်အပ်တဲ့ပညာတွေထဲက သားဖွားမီးယပ်ကလွဲလို့အားလုံးတွဲသင်ခဲ့ရပြီး၊ တချိန်ထဲမှာ ကိုယ့်သွားဘက်က ဘာသာကိုလည်းအထူးပြုသင်ရလို့ အတိုင်းအတာတခုအထိပင်ပန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၆ ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာတော့...
အဖဦးသာဥာဏ်၏သားမောင်ဥာဏ်..ဂုဏ်ထူး..သွားကျန်းမာရေးပညာအပိုင်း (၁) (သွားမြစ်ဝန်းဆိုင်ရာဆေးပညာ+ကာကွယ်ရေးနှင့်လူထုသွားကျန်းမာရေးပညာ)၊ ဂုဏ်ထူး..သွားကျန်းမာရေးပညာအပိုင်း (၂) (ကလေးသွားရောဂါကုဆေးပညာ+ သွားညှိကုပညာ) ...ဆိုတဲ့အလှည့်ကျပါမောက္ခရဲ့ခေါ်သံနဲ့အတူ၊ မိဘတွေရဲ့ကျေနပ်ပီတိအပြုံး၊ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အားပေးလက်ခုပ်သံတွေနဲ့ ဘွဲ့လက်မှတ်တက်ယူအပြီးမှာတော့.......
ကမ္ဘာတစ်လွှား ကျော်ကြားထင်ရှား ခဲ့သော သမားဟူးရားကြီးများ အား သက်သေ ထား၍ အကျွန်ုပ်သည် ဤအဓိဌာန်ပြု ကတိသစ္စာကို ရွတ်ဆို သစ္စာပြုပါအံ့။
၁။ ကျွန်ုပ် သည် လူသားအားလုံးတို့၏ ကိုယ်၏ကျန်းမာရေး၊ စိတ်၏ကျန်းမာရေး ကို ကျွန်ုပ်၏ အရေးကဲ့သို့ ယူဆပါအံ့။
၂။ ကျွန်ုပ်သည် ဆေးပညာသင်ကြားပေးသော ဆရာသမားများအား မိဘသဖွယ် ရိုသေလေးစားပါအံ့။
၃။ ကျွန်ုပ်သည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆေးပညာရှင်များကို ညီရင်းအစ်ကို၊ မောင်ရင်းနှမကဲ့သို့ လေးစားစွာ ဆက်ဆံပါအံ့။
၄။ ကျွန်ုပ် သည် သမားကောင်းတစ်ဦး၏ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် မွန်မြတ်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းပါအံ့။
၅။ ကျွန်ုပ်သည် ဆည်းပူးတတ်မြောက်ထားသော ဆေးပညာဖြင့် ဂီလာနပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကျန်းမာရေးကို စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ ရှေ့ ထား၍ လူမျိုးဘာသာ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး စွမ်းစွမ်းတမံ စောင့်ရှောက်ကုသပါအံ့။
၆။ ကျွန်ုပ်သည် ဂီလာနပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ကုသစဉ် တွေ့မြင်ကြားသိရသည့် လျှို့ ဝှက်အပ်သော အတွင်းရေးကိစ္စများကို ဖွင့်ဆိုအပ်သည်တို့မှ လွဲ၍ မည်သည့်အခါတွင်မဆို ဖွင့်ဟခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါအံ့။
၇။ ကျွန်ုပ်သည် လူသားတို့အား ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေမည့်ဆေး၊ သေစေတတ်သည့်ဆေးများကို ကိုယ်တိုင် ပေးခြင်းမှ လည်းကောင်း၊ သူတစ်ပါးအား ပေးစေခြင်းမှ လည်းကောင်း အခါခပ်သိမ်းရှောင်ကြဉ်ပါအံ့။
၈။ ကျွန်ုပ်သည် တရားမ၀င်သောခွဲစိတ်ကုသခြင်းတို့မှ အမြဲတစေ ရှောင်ကြဉ်ပါအံ့။
၉။ ကျွန်ုပ်သည် ဆည်းပူးတတ်မြောက်ထားသော ဆေးပညာဖြင့် လူသားတို့၏ ဘ၀နှင့်အသက်ကို တန်ဖိုးထား လေးစားစွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါအံ့။
ယခု ကတိသစ္စာပြုသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါသော် ကျွန်ုပ်သည် ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာ အဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံပါစေသား။
ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်-သွားဆရာဝန်တိုင်းဘွဲ့ယူချိန်မှာ ဆရာသမားအားလုံးရဲ့ရှေ့၊ ဧည့်ပရိဿတ်အားလုံးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဝန်ခံကတိသစ္စာပြုကြရတဲ့ကတိသစ္စာကို အလေးအနက် ရွတ်ဆိုရင်း၊ သွားဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါပြီကောဆိုတဲ့အတွေးနဲ့၊ ငယ်စဉ်ချိန်တွေကို ပြန်သတိရလိုက်မိတဲ့အကြောင်း၊ ဆရာဝန်ကတိသစ္စာကိုစောင့်ထိန်းရင်းလူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ သွားဆရာဝန်ဖြစ်လာရခြင်းအကြောင်းတွေကို စီကုံးမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by Dr. Nyan at 6:35 PM
The thing i learned from this post is children should always be with parents when important time of their life...parents are the ones who really take good care of their children..nobody can compare them....
i also attended at BEHS4...
အရေးအကြီးဆုံးအချိန်မှ ကံဆိုးပါ့ ဦးဥာဏ်ရယ်။
ဒါပေမဲ့လဲ အခုတော့ သွားဘက်ဆိုင်ရာမှာ ထူးချွန်နေပီပဲ။ :)ဒါနဲ့ဦဥာဏ်နဲ့ မဝါ မှာ မဝါက ငယ်မယ်ထင်တယ်နော်။ မဝါက မီးကမီးက လို့ပြောပြောလို့။ :)
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ ထူးချွန်နေဖို့ က အကောင်းဆုံးပါ... လမ်းလျောက်ရင်း အိပ်ပျော်နေတဲ့
အကြောင်း ဖတ်ပြီး ပြူံးမိ တယ်... ဆရာဝန် တွေ ထားရတဲ့ ကတိသစ္စာ ပြု အချက်တွေကိုတော့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မှတ်သား လိုက်ရတဲ့ အတွက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ( ကျမရဲ့  တူတော်မောင် တယောက်လည်း လူ ဆရာဝန် တက်ဖို့ အမှတ်မမီလို့
သွားဆရာဝန်ဘဲ တက်လိုက်ရတယ် )
That's absolutely true Ma Daisy. There were many hardship and lonely days in my life there in May Myo. It isagood lesson for me asaparent. By the way, I left BEHS-4 in 1984.
အန်တီဝါကဦးဥာဏ်ထက်၆လငယ်ပါတယ်။ မွေးနှစ်ကတော့ တနှစ်ထဲဘဲလေ။
တကယ်တော့ဦးဥာဏ်ရဲ့လေးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ခြေဖျားတောင်မမီသေးပါဘူး။ ဆရာတွေနဲ့ယှဉ်ပြောရတာက ကိုယ်အပါအ၀င် generation အလိုက်
အရည်အသွးတွေတဖြည်းဖြည်းကျလာတာကို ခံစားရလို့ပါ။ ကိုယ့်တပည့်တွေလက်ထက်ကျရင်တော့ ပြန်ဦးမော့လာအောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင်လေ့လာဆည်းပူးပြီး အသိတွေပြန်ဖြန့်ဝေပြီး သူတို့တွေကို encourage လုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူမိပါတယ်။
ပထမနှစ်ကျောင်းသားသစ်တွေဝင်လာစမှာ ကျွန်တော်တို့ကုသရေးပိုင်းသင်တဲ့ဆရာတွေက ကိုယ့်ပညာရပ်အလိုက်စိတ်ဝင်စားစရာ၊ အားကျပြီးသွားဆရာဝန်လုပ်ချင်စိတ်ပါလာအောင် ရှင်းလင်းပြပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနဲ့ကိုယ်ချင်းစာပြီး၊ ဆေးအမှတ်မမီလို့သွား ရောက်လာသူတွေကို အားပေးခဲ့ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆေးအမှတ်ထိပ်ပိုင်းနားအထိအမှတ်မြင့်ပေမယ့် သွားကိုဦးစားပေးလျှောက်ပြီးလာတက်ကြသူတွေရှိလာ
ပါပြီ။ တူတော်မောင်ကျောင်းမပြီးသေးရင်တော့ နောက်နှစ်ဧပြီကစပြီး တွေ့ရတော့မှာပေါ့။
i finished high school in 1998 from Dagon 1, yangon..
attended only for primary school at BEHS4=)
anyway..., people from Taunggyi are smart in any field...
whenever i say abt this , my husband never agrees coz he is not from taunggyi :)
ဆရာ့ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ကျနော်တွေးမိတာက အရင်ကွန်မင့်ပေးထားသူတွေနဲ့ မတူဘူးဖြစ်နေလို့
ဘာမှမပြောတော့ပါ။ မတူပေမဲ့ အကောင်းဘက်က တွေးတာပါ။
ဆရာ့စိတ်နေသဘောထားကို ကျနော် သိပ်ကိုလေးစားမိတယ်။ တနေ့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် ဆရာ့ကို ကျနော်လာတွေ့မယ်ဗျာ။
အချိန်ပေးတကူးတကလာဖတ်ပြီးcomment ပေးသွားတဲ့စာဖတ်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလည်းအထူးလေးစားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ။
အောင်မလေး ဆရာရယ်..သွားဆရာဝန်တွေ အရမ်းဈေးကောင်းရနေတာကို လူဆရာဝန်ထက် ပိုသာတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ သွားဆေးကုရင် အခမဲ့ မဟုတ်ဘူး။ သွားအလှစိုက်မလား။ သွားပြုပြင်မလား၊ အခုဆိုရင် မျက်နှာနုအောင် တီထွင်တာတောင် ရှိနေတာကို..
I also never forget the experiences about 10th grade exam. That is changed to my life as well. I also got 445 in 10th grade. Whatacoincidence!! I hadaproblem in Maths exam day that I lost 20 marks in exam. And I only got ECO. I guess, I passed one year earlier than you.
Please urgently let me know your clinic address in Yangon. Coz I have to ask my mother to go to your clinic for checking her teeth.
I am going back to Myanmar at the end of March. Unfortunately, I don't haveaclinic now. I will be in Yangon Dental University. It is on the Than Thu Mar Rd, Thingangyun Ts.
htoo lin said...
သွား​ဆေး အ​ကြောင်း ​လေး​ရေး​ပေးပါဦး ဗဟုသုတ ရချင်းလို့ ကျ​နော်​လဲကျက်​စာ မရဘူး